Vietnam: Mpitoraka Bilaogy Voasambotra, Voampanga Ho Nanaparitaka Fampielezan-kevitra “Manohitra Ny Fitondrana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2013 5:00 GMT
Truong Duy Nhat, Pham Viet Dao ary Dinh Nhat Uy dia mpitoraka bilaogy telo be mpahalàla izay nosamborina tany Vietnam tanatin'ny iray volana latsaka monja. Voampanga ho nanaparitaka fampielezan-kevitra manohitra ny fanjakana izy rehetra ireo.
Nosamborina ny 26 Mey tany Danang i Truong Duy Nhat. I Pham Viet Dao notanana tany Hanoi ny 13 Jona. Ny 15 Jona, nentina teo ambany fanaraha-mason'ny mpitandro filaminana i Dinh Nhat Uy tany amin'ny faritanin'i Long An.
Nampiditra an-tranomaizina mpitoraka bilaogy sy mafana fo momba ny demokrasia 46 i Vietnam tamin'ny 2013. Mety misy ifandraisany amin'ny latsa-batom-pitokisana vao vita tao amin'ny Antenimieram-pirenena izao taha ambonin'ireo fisamborana mpitsikera ny governemanta tsy refesi-mandidy izao, na ireo olon-tsotra hitan'ny governemanta ho “fahavalon'ny fanjakana”.
Avotra tamin'ilay latsa-batom-pitokisana voalohany indrindra ny Praiminisitra saingy 30 isanjaton'ny Antenimieram-pirenena no nifidy nanohitra azy.
Matetika dia ampiasaina hitanana olon-tsotra manohitra ny governemanta ny Artikla 88 ao amin'ny Fitsipika momba ny Heloka bevava izay mandrara ny fampielezan-kevitra manohitra fanjakana. Ny Artikla 258 ao amin'ny Fitsipika momba ny Heloka bevava dia manasazy ny tsy fahaizana mampiasa ny “fahalalahana demokratika hisembanana ny tombotsoan'ny fanjakana sy ireo zo fototra ary ny tombotsoanà fikambanana na olon-tsotra” ary ahazoana sazy fito taona an-tranomaizina. Namoaka baiko ihany koa ny Praiminisitra, tamin'ny herintaona, izay mibaiko ny hanakatonana ireo bilaogy “maneho fanoherana” rehetra.
Iray volana lasa izay, notànana nandritra ny fotoana fohy tany amin'ny faritanin'i Khanh Hoa ny mpitoraka bilaogy Nguyen Ngoc Nhu Quynh—izay mitoraka bilaogy amin'ny anarana Me Nam (Reny Holatra)– noho ny fihazonany dikasoratry ny Fanambarana Iraisam-pirenena ny Zon'olombelona navoakan'ny Firenena Mikambana. Araka ny tatitra dia nosamborina izy satria tsy nanana fahazoan-dàlana mazava hitsinjara fitaovana tahaka izany.
Truong Duy Nhat, izay mitoraka bilaogy ao amin'ny “Another Viewpoint”, (Fijery Hafa) nanamarina fa sady tsy mpanao ratsy izy no tsy maneho fanoherana:
Na inona na inona heviny momba ny politika na tsikera mikasika ny governemanta, tokony hekena ao Vietnam ny Zon'olombelona eken'izao tontolo izao izay zon'ireo mpitoraka bilaogy koa, ny amin'ny fahalalahana miteny. Hanohy hanaraka ireo tantara ireo ny Global Voices Advocacy araka ny fizotrany.
16 Mey 2021Azia Atsinanana
20 Oktobra 2020Azia Atsinanana
Mpikatroka mpanoratra an-gazety Vietnamiana nosamborina ho manao ‘fampielezan-kevitra manohitra ny fanjakana’